LA OGAADAY: Sababta Liverpool Ugu Faraxsan Tahay Guuldaradii Man United Ka Soo Gaadhay Sevilla Oo Aan Ku Koobnayn Xifiltanka Iyo Colaada Labada Kooxood Iyo Sabab Ka Wayn Oo La Ogaaday. – GOOL24.NET
LA OGAADAY: Sababta Liverpool Ugu Faraxsan Tahay Guuldaradii Man United Ka Soo Gaadhay Sevilla Oo Aan Ku Koobnayn Xifiltanka Iyo Colaada Labada Kooxood Iyo Sabab Ka Wayn Oo La Ogaaday.
March 15, 2018 Mahamoud Batalaale
Kooxaha Liverpool iyo Manchester United ayaa ah labada kooxood ee xifiltanka ugu wayn uguna waqtiga dheeri uu ka dhexeeyo marka laga hadlayo kubbada cagta England, waana labada kooxood ee England ugu guulaha badan waxaana markasta jira xifiltan aan dhamaad lahayn oo labada kooxood u dhexeeya. Guuldarada midkood soo gaadhaa waxay farxad galisaa kooxda kale marka laga hadlayo xifiltanka labada kooxood.
Guuldaradii xalay soo gaadhay Manchester United ee ay tartanka UEFA Champions League kaga hadhay gacmaha kooxda Sevilla waxay jaamahiirta iyo kooxda Liverpool u ahayd mid ay aad u soo dhaweeyeen laba sababood oo kala duwan.
Waxaa marka ugu horaysaba la dareemi karaa sida ay Liverpool ugu faraxdan guuldaro Man United ku soo gaadhay garoonkeeda Old Trafford maalmo kooban gudahood markii ay guuldaro kala soo laabteen iyaga oo u arkayay in garsoorkii kulankaasi ay kooxdooda danbi wayn ka galeen.
Laakiin marka laga yimaado xifiltanka iyo colaada u dhexaysa Manchester United iyo Liverpool waxaa jirta sabab xaqiiq ah oo ka muhiimsan arintan taas oo ay Liverpool faa’iido wayn ku helayso guuldaradii Manchester United ka soo gaadhay Sevilla.
Sharciga dhaqaale qaybinta UEFA ayaa ah sababta ay Liverpool si wayn ugu faraxday guuldaradii Manchester United ka soo gaadhay Sevilla, waxaana farxadan la qabta kooxda Manchester City oo iyada lafteedu faa’iido dhaqaale ka heli doonta hadhitaankii Man United.
Liverpool ayaa haddaba jeebka ku ridatay 50 milyan euros oo ah lacag ay ka xaqiijiatay UEFA taas oo ay ku heshay in ay soo gaadhay sideed dhamaadka UEFA Champions League laakiin waxay heli doontaa lacag ka badan intii hore haddii ay Man United soo bixi lahayd.
UEFA ayaa kooxaha u qaybisa dhaqaale ka baxsan xuquuqda baahinta TV-ga taas oo lagu saleeyo wadan kasta kooxaha u soo baxay wareega xidiga ee UEFA Champions League waana sabab ay kooxaha Liverpool iyo Man City oo ilaa hadda soo baxay dhaqaale ka badan u heli doonaan haddii ay Tottenham iyo Man United soo bixi lahaayeen.
Haddii ay Chelsea sidoo kale hadho waxaa dhaqaalihii saamiga kooxaha England oo dhan qaybsan doona Liverpool iyo Manchester City. Aan soo qaadano sababo cadayn u ah sida dhaqaale qaybinta UEFA uu saamayn xoogan ugu yeesho kooxaha isku dalka ah ee tartankan baaqiga ku sii noqda.
Xili ciyaareedkii hore kooxda Real Madrid ee ku soo guulaystay koobka UEFA Champions League ayaa heshay 81.1 milyan euros halka kooxdii ay koobka ka qaaday ee Juventus ay heshay 110.4 milyan euros waxayna sabbatu ahayd in Juventus ay ahayd kooxda kaliya ee Talyaani ah ee soo gaadhay wareegii 16ka kooxood ilaa finalkii, sidaa daraadeed, waxay kalideed afka udhigatay dhamaan saamigii dhaqaale ee kooxaha Itali.
Halka dhaqaalihii Real Madrid ay hoos u dhigtay in saddex kooxood oo Spanish ahi ay soo gaadheen siddeed dhamadka UEFA Champions League isla markaana ay si isleeg u qaybsadeen lacagta UEFA ay kooxaha siiso ee aan ahayn baahinta xuquuqda TV-ga oo gaar ka ah.
Sababtan awgeed Manchester City iyo Liverpool ayaa markale sugaya in Barcelona ay Chelsea ka reebto tartankan si ay kali ugu noqdaan dhaqaalaha UEFA waana sababta ugu wayn ee ay Liverpool ugu raaxaysatay guuldaradii Man United ka soo gaadhay Sevilla.
Markale hore u soo gaadhay siddeed dhamadka UEFA Champions league ayaa heshay 81.7 milyan eruos iyada oo ka lacag badnaatay kooxdii koobka Champions League ku guulaysatay ee Real Madrid waxayna sababta ugu wayni ahayd in ay Leicester City ahayd kooxda kaliya ee England matalaysay ee soo gaadhay siddeed dhamaadka UCL waxayna kalideed qaadatay dhamaan lacagihii England loo qorhseeyay.
Waxaan filayaa in hadda si fiican loo fahmay sababta ugu wayn ee Liverpool ay ugu faraxsantahay guuldaradii Manchester United ka soo gaadhay laakiin waxaa farxadan la wadaagta Manchester City oo iyaduna soo gaadhay siddeed dhamaadka UEFA Champions League.